Madaxweyne Farmaajo oo Cambaareyn kala kulmay Sawir uu la galay Cornel Tuke | SMC
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Farmaajo oo Cambaareyn kala kulmay Sawir uu la galay Cornel Tuke
Madaxweyne Farmaajo oo Cambaareyn kala kulmay Sawir uu la galay Cornel Tuke
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cambaareyn kala kulmay dhanka baraha bulshadda ka dib markii uu Sawir la galay Yuusuf Cabdi Cali Tuke oo Maxkamad ku taalla Mareykanka ay ku eedeysay xasuuq dad Soomaaliyeed oo ku sugnaa Gibilay Somaliland xilligii Siyaad bare.
Xildhibaano, Siyaasiyiin iyo bulshadda isticmaasha baraha bulshada ayaa Madaxweynaha aad ugu dhaliilay in maanta uu kiciyay dareenka Ehelada dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay gacanta maamulkii Milatariga.
“Waxaan magaca umadda Soomaaliyeed raalli gelin uga siinayaa walaalaheen reer Somaliland oo Madaxweyne Farmaajo uu dib u damqiyey dareenkooda soona xasuusiyey maalmo murugo lahaa ka dib Markii uu sawir la soo galey shakhsi ku eedaysnaa dambiyo dagaal iyo xasuuq dad Soomaaliyeed” Xildhibaan Fiqi oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya.
Xeerbeegti Maraykan ah ayaa dambi ku heshay Kornayl Yusuf Cabdi Cali oo ku magac-dheer Kornayl Tuke, oo la sheegay inuu jirdil gaystay xilligii uu socday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya
Konrnayl Tuke ayaa waxaa dacwo ka gudbiyay Farxaan Taani Warfa, oo sheegay inuu jirdil iyo toogasho u gaystay
Waxaa lagu xukumay inuu bixiyo magdhaw gaaraya 500,000 oo doollar.
Previous articleDaawo Lafta-Gareen oo awooddii ka qaaday xildhibaanada K/Galbeed amarna dul dhigay
Next articleKolonyo ay la socdeen ciidamada AMISOM oo lagu weerarray magaalada Muqdisho